Ọrụ Nursing na ụlọ ọgwụ Dubai na-ezite m CV? 🥇
Ọrụ ndị nọọsụ na Dubai na Abu Dhabi
Nlekọta oru na Dubai Guide maka C-Level Career
Nwere ike 13, 2018
Ọrụ Nursing na Dubai na Abu Dhabi
Ọrụ nọọsụ na Dubai maka obodo na ọrụ mba nile na-achọ. Ụlọ ọrụ Dubai City kwuru na a ga-enyere ndị na-achụpụ aka. N’iburu nke a n’uche, ụlọ ọrụ anyị na-edepụta nkọwa zuru oke maka ndị nọọsụ na ndị nọ na ngalaba ahụ ike na Dubai. Dị ka Nọọsụ na Dubai, ị ga-enwe karịa na gafere ihe niile ị mara.
Dị ka nọọsụ, ọ bụghị ọrụ dị mfe ịme. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọrụ nọọsụ na-esite n'ike mmụọ nsọ nyere ndị ọzọ aka. Ọ bụ ụdị enyemaka onye ọbịa ma na-akpali ibe ya. Ọrụ a kpọmkwem ọ bụghị maka onye ọ bụla. Ọzọkwa, nọọsụ ọrụ na Dubai na-eme ka ihe ka mma.
Ị dị ka nọọsụ na Middle East ga-ahụ ihe anyị na-eme n'anya. N'ihi na mgbe ị hụrụ ihe ị na-eme n'anya, ị gaghị ahapụ ya. Nke a bụ ihe niile ị nwetara na ịkwesịrị maka ọnọdụ a. N'aka nke ọzọ, ihe ka ọtụtụ n'ime ụlọ ọgwụ ahụ dị mma ịpụ.
Mgbe onye ọrịa ọhụrụ nọrọ n'ụlọ ọgwụ maọbụ ebe ọ bụla ọzọ. Ọrụ gị abụghị naanị ịnọ n'ime ụlọ nke nwere ihe ndina ma mee ka ọ hie ụra. Ọtụtụ n'ime ndị ọrịa ahụ bụ Dubai mkpa enyemaka dị ukwuu na nchekwa. Ị ga-enwe ahụmahụ. Ọzọkwa, lelee ihe ịkwesịrị inwe ezipụ na nlekọta ahụ ike.
Ọrụ dị n'ụlọ ọgwụ dịka Nọọsụ?
Imirikiti ụlọ ọgwụ na-achọ onye dị njikere ịgafe. Karịsịa na Omenala Arabik inyere ndị mmadụ aka bụ ihe niile ha na-eme na UAE. N'akụkụ dị mma, ọ bụrụ na ikwenye ịrụ ọrụ nọọsụ ọrụ na UAE. N’ezie na ị bụ onye nwere ezigbo igwe iji meziwanye ndụ gị na ndụ ndị gbara gị gburugburu. Karịsịa dị ka onye mba ofesi, na Dubai. Will ga-agbasi mbọ ike, mana oge ọ bụla
Mgbe ọ bụla m malitere ọrụ ịkwalite ọrụ na Dubai. O doro anya na ị ga-agba ndị ọzọ ume inyere gị aka. Na Dubai abụghị nanị ebe ị ga-esi chọpụta ọrụ na ndị nọọsụ. Enwere ndepụta nile nke ụlọ ọgwụ na United Arab Emirates.
Ọgwụgwọ na Dubai na ndị nọọsụ
Nwa akwukwo nke nwere mmeri kwesiri iguta a nduzi maka ọgwụgwọ. Ọtụtụ ndị ọrụ ọhụrụ na Dubai ga-enwe ike iru ụfọdụ njirisi.
Ka anyị malite site n'iji ihe na-eme ihe na ikwekọ aka. Otu n'ime ihe atụ bụ ndị ọrịa ọhụrụ na ụmụaka ị ghaghị ijide n'aka na ị maara ihe ị na-eme. Maka ma ọ bụrụ na ị kpakpando na ọrụ a ị ga-emeri ọtụtụ nsogbu. Ọmụmaatụ, dị ka onye ọhụụ ọhụrụ na UAE. Ọdịbendị niile na-eme ka ị nọ n'okpuru ikpere. Na nke ahụ gụnyere ịgbachi, ịgbagọ, ịdọpụ, na ịkwado gị n'ọganihu ụfọdụ.
Ngwọta ọgwụ na Dubai adịghị mfe. Ịkwesịrị ịmụta iwu na usoro na kpọmkwem njiri maka Dubai. Dịka onye na-elekọta ndị nọọsụ na Dubai, ị ga-arụ ọrụ dị iche iche. Site na ụfọdụ ọrụ kwesịrị ekwesị ọrụ dịka ndị isi nlekọta rịọrọ. Ma ụfọdụ ọrụ ịchọrọ iji jikwaa onwe gị na nnukwu mgbochi dị ka ọgwụgwọ ọgwụ iwu na UAE.
N'akụkụ dị mma, ụlọ ọgwụ ụwa na ụlọ ọrụ ndị mmadụ niile dị n'otu onye ọrụ were ohere. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka onwe ha dị njikere itinye aka n'ọrụ dịgasị iche iche ma na-akwado ndị ọrụ nurse gụnyere. Dị ka nọọsụ na Dubai, ị ga-arụ ọrụ na ọtụtụ mba ndị ọrịa International. Ya mere ị ghaghị icheta na ị gaghị akpa ókè n'ihi nkwarụ, ọnọdụ mgbochi ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ echebere n'okpuru iwu gọọmenti, obodo ma ọ bụ iwu mpaghara.
Nursing ọrụ na Dubai ọchịchị ụlọ ọgwụ
Ọfọn, ọrụ kachasị mma ị ga - enweta na Dubai. Ọrụ ndị nọọsụ na-arụ na Dubai na ụlọ ọgwụ si Dubai na Abu Dhabi. Ha bụ otu n'ime ihe kacha mma, ọ dịghị ajụjụ a jụrụ. Ọzọkwa, obi ụtọ mgbe ị ga-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ UAE dị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-achọ inweta ụgwọ gị na oge. Ma ọ bụ if ị na-achọ ọrụ ogologo oge.
Ọrụ na ụlọ ọrụ ọchịchị Dubai. Bụrụ ụzọ maka nsogbu gị kwa ụbọchị. Na ụgwọ ọrụ dị mma na akụkụ dị mma nke nkwalite. Ị nwere ike ibute ụkwụ gị ma gbaa ọsọ. Ọnweghị ihe ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ ala ọzọ. Ma obu i bi na UAE. Enwere naanị otu akụkụ adịghị mma n'ọrụ a. Ma ọ bụ ọrụ siri ike. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na Dubai ụlọ ọgwụ ndị ịchọrọ ilekọta.
Ka anyị na Gọọmenti malite n'ụlọ ọgwụ
N'okpuru nduzi anyị, ị nwere ike ịchọta ndepụta zuru ezu nke ụlọ ọrụ. Karịsịa, ọ bụrụ na ị na-achịkwa onwe gị na ịchọrọ maka ọrụ Nursing na Dubai. Dubai City Company bụ ezigbo ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ na ngalaba ahuike.
Anyị ọkachamara ndu na-enye gị nkọwa zuru ezu. Ndị otu anyị agbalịwo ijikwa gị Ebe a na-elekọta Dubai ebe ị nwere ike bulite ihe mmalite. Nke mbụ na listi anyị bụ òtù ndị metụtara gọọmentị.
Ihe DHA bu n'uche Dubai dịka No1. N'ikwu okwu n'ozuzu, e mepụtara usoro a dum iji nye usoro nlekọta ahụike nwere ike ịnweta, ọfụma ma nwekwaa ọrụ. Ruo ugbu a usoro a na-a overụ ndị ahịa na-enweghị atụ.
Njikwa nke na Dubai Health Authority. Gbalịsie ike na-echekwa usoro ahụike nke ọha na-agbago wee bulie ọkọlọtọ. Ọzọkwa, ndị ọrụ niile nọ na DHA na-elepụ anya iji melite ogo ndụ na ahụike n'ime United Arab Emirates.
Ihe omuma nke DHA kachasi ndi ochichi. Karịa ịgbanwe Dubai ka ọ bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ ahụike. Imirikiti ndị ọrịa na-elepụ anya ime ya ebea site na ime ka umuaka ndi ohuru ohuru na ndi nlekota anya na site na ime ka ndi obodo tinye aka. N’ezie ka ị ga na-arụ ọrụ dị ka ndị nọọsụ na Dubai. Companylọ ọrụ a ga-aka nke ukwu nhọrọ maka ọrụ na Emirates.
Na akụkụ ọjọọ, ị nweghị ike na-etinye maka ọrụ nkịtị na Dubai ya na DHA. I kwesiri itinye aka na weebụsaịtị Gọọmentị izugbe. Site na mgbe ahụ na-ahụ maka ngalaba ahụike maka Emirate of Dubai. Mana, DHA na-elekwasịkwa anya n'inye ọrụ site n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ nzuzo ndị ọzọ na UAE.
Ụlọ ọgwụ na Clinics n'okpuru na Dubai Health Authority
Ụlọ Ọgwụ Armada
Ogwe Ụlọ Ọrụ Armada Otu Day
Ụlọ ndị Armada
Armada Group (nkeonwe)
Nyochaa anya na DHC
Nlekọta Dubai mmetụta na-enye ọtụtụ ọkwá. Inwere ike ileba anya nke kacha masị gị. Na weebụsaịtị ha, ị nwere ike malite ịhọrọ ọnọdụ na ụdị nke ohere. Ụlọ ọrụ nke abụọ ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ nyocha na Dubai.
Seehụ oghere niile dị na ha website. Ha haziela oghere dị ka ọnọdụ ha wee họrọ. Nke ọ bụla nkọwa ọrụ na ozi zuru ezu. Oghere dị iche iche DHHC gụnyere mgbe niile nwere njikọ maka itinye n'ọrụ.
Otu n'ime ahụike kachasị mfe ụlọ ọrụ iji chọta ohere ị nwere ike ịmaliteghachi na DHC online. Nke a bụ ụzọ kachasị mfe na nke a pụrụ ịdabere na ya ka a tụlee maka ọnọdụ ọ bụla.
Dubai Healthcare City ugbu a nwere ọtụtụ ọrụ maka ndị nọọsụ. Na 2018 na 2019 ha na-ejikwa otu ọ bụla gburugburu ngụkọta nke 23-50 emeghe ọrụ (s). Yabụ na ọ dị mma ịnwe nlele na weebụsaịtị ha site n'oge ruo n'oge.
Ụlọ ọgwụ na Clinics n'okpuru Dubai Healthcare City
Ụlọ ọgwụ Ọgwụ Mediclinic (Mediclinic International)
Dr Sulaiman Al-Habib Ụlọ Ọrụ Ahụike
Ụlọ ọgwụ Eye Moorfields Dubai
Sobeh Vascular na Medical Center
Ọrụ na Danat Al Emarat Hospital
Ụlọ ọgwụ Danat Al Emarat bụ ụlọ akwụkwọ ọzọ ọrụ Abu Dhabi. Hospitallọ ọgwụ a nwere nke ya base in Abu Dhabi. Ha na-achọ mgbe niile maka ndị ọrụ ahụike ọkachamara ruru eru. Ọkachamara ndị nọọsụ aha. Ọ bụrụ n’inwere mmasị, zitere CV gị hr@danatalemarat.ae
Ha bụ maa ga-enwe mmasị itinye gị. N'ezie, ọ dị gị mkpa inwe ahụmịhe dị mma. N'ihi ọtụtụ ndị ọrụ na- Danat Al Emrat ụlọ ọgwụ enwe ezigbo iru eru. N'iburu nke a n'uche, na-arụ ọrụ na ndị isi ụlọ ọrụ ahụ ike. Enwere ike nnukwu mgbanwe na ọrụ gị.
Companylọ ọrụ a bịara ije ozi obodo anyị na UAE. Ọzọkwa, ụlọ ọrụ kachasị elu nke na-enye ụkpụrụ nlekọta ahụike kachasị elu na steeti mara mma site na mmekọrịta nke ọkachamara ahụike ụwa.
Ọhụụ maka ọrụ Nursing na Dubai
Ụlọ ọrụ ahụ na-achọ ịbụ onye ndú mba. Maka otu ihe na ụlọ ọrụ a, ị kwesịrị ịdị mma na ahụike. Ọ bụrụ na ị na-achọ mma na ime ihe ọhụrụ. Yana na-arụ ọrụ na ụmụ nwanyị na ngalaba nlekọta ahụike ụmụaka. Ọhụụ a maka gị kwesịrị ịdị mma. Na-eme ka onye ọrịa dịkwuo mma ahụmịhe na ịdị mma nke ọrụ. Maka ndị ọrịa ha bụ isi.
Ọrụ na Shaikh Khalifa Medical City
Ụlọ ọrụ ọzọ anyị kwesịrị ịbịakwute gị bụ Sheikh Khalifa Medical City. Ọ bụkwa òtù kachasị elu maka ọrụ na UAE. Sheikh Khalifa Medical City (SKMC) di na Abu Dhabi City. Na ọtụtụ ndị obodo site na akụkụ nke Emirates na-eji ụlọ ọgwụ obodo a.
A gaghị arụ ọrụ na ụlọ ọrụ Nursing na ụlọ ọrụ flagship. Shaikh Khalifa Medical City bụ otu n'ime ha. Na ndị na-achọtara ndị a n'anya maka usoro nlekọta ahụike ọha na eze dị mma na Abu Dhabi.
Ọrụ ndị nọọsụ na Dubai na SKMC nwere ọtụtụ akụkụ dị mma. Otu n'ime ogige kachasị mma bụ ndi otu tozuru oke nke oma. N'iburu nke a n'uche, ị nwekwara ike ịnye ọrụ zuru oke na usoro ọzụzụ ahụike niile. N'akụkụ na-adịghị mma, ọ dị gị mkpa inwe ahụmịhe dị mkpa na mkpa nke obodo.
Ọ bara uru iji SKMC rụọ ọrụ dika nọọsụ?
Kedu ihe kpatara ị ga - eji chọọ ka etinye aka na SKMC ?. N'ihi na ha bụ ndị kasị ukwuu na-enwe a otutu imeghe. Nothapụ ịkọ na ha bụ ụlọ ọgwụ kachasị ukwuu na UAE. Buildinglọ ahụ mejupụtara ụlọ ọgwụ sekọndrị 586 na ụlọ ọgwụ ọkachamara na-elekọta ndị ọrịa 14. I nwekwara ike inyere ndị ọzọ aka Abu Dhabi Bank Blood Ọ bụ n'ihi na inyere ndị ọzọ aka abụghị naanị uru.
Ha na-ejikwa n’aka Joint Commission International. A nabatara SKMC dika Cycle IV Chest Pain Centre na Primary Angioplasty Intervention. Maka ihe karịrị nke ahụ SKMC nwere ọtụtụ onyinye mba ofesi ma bụrụ onye mbụ na-abụghị USA iji mezuo amara Cycle III na naanị 12th gburugburu ụwa. Site n'ihe a ha rụpụtara, ha bụ ọ bara uru na ịmalite ọrụ.
SEHA - Abu Dhabi Health Company Company, nke Cleveland Clinic gbara.
A ọrụ Cleveland Clinic Abu Dhabi
Nke a bụ ihe ọzọ ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ pụrụ iche. Ọzọkwa, nke a abụghị naanị azụmaahịa dabeere na UAE. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndọtị na - enweghị atụ ọrụ UAE. Mgbe ahụ tinye akwụkwọ maka azụmahịa dabeere na United States na Abu Dhabi. A na-akpọ ụlọ ọrụ a Model Cleveland Clinic's Model of Care.
Maka ọrụ ndị nọọsụ na Dubai, Cleveland Clinic Abu Dhabi na-enye ohere nnweta na ọrụ. Ndị ọpụpụ ọhụrụ na Abu Dhabi na-ehulata iji nweta ọrụ na ụlọ ọrụ a. Maka na enwere ike ịmalite Abu Dhabi. Na mgbe ahụ na-agagharị ọrụ ha na ndu maka nlekọta ahụ ike kachasị mma n'ụwa.
Dịka onye na-achọ ọrụ ọhụụ. ị kwesịrị iche n’echiche n’ikpeazụ. Ọ bụ ọrụ nọọsụ na ụlọ ọrụ ndị America. Ma eleghị anya, a smart echiche n'ihi na nke ahụ nwere ike ịbụ na-ebelata ọrụ gị na-achọ oge n'ime ebe ahụ. Ga-enwekwa ahụrịrị ndị ọrịa ụwa niile. N'aka akụkụ, ọ nwere ike ịdị mkpa ịgaga mba ọzọ maka ọgwụgwọ ọzụzụ. Dịka ọmụmaatụ United States na Canada.
Malite ọrụ na Dar Al Shifaa
Ebe ọzọ maka ọrụ nọnye bụ Dar Al Shifaa. Ọrụ nwere mmasị dị ukwuu. N'ozuzu, ikwu okwu otu n'ime ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ kachasị mma. Lọ ọgwụ ahụike na nke ịwa ahụ, abụghị gọọmentị rụrụ ọrụ. Ma gọọmentị metụtara ya. Ihe kwesịrị ya lee anya dinta ohu.
Ọrụ 24 / 7 na ahụike na Abu Dhabi. UAE ekenyene ufọk ufọk ufọk Ishmael site na Ishmael & ụmụ, dị na Abu Dhabi obodo, United Arab Emirates. Ọ bụkwa ebe dị mma maka ndị na-achọ ọrụ n'ụwa.
Nursing ọrụ na Dubai bụ ọ dị mma maka ndị mba ụwa?. Dị ka ihe mere, Hospitallọ Ọgwụ Dar Al Shifaa bụ ụlọ ọgwụ mbụ nkeonwe na Abu Dhabi. Ọzọkwa, ha nwere ikikere nke Ngalaba Ahụike nyere na Eprel 1 982. N'ihi ya, ọ bụghị Government nwere ikike mana enwere ikike zuru oke.
Karịa nke ahụ, ụlọ ọgwụ ụlọ Dar Al Shifaa nwere ihe nkiri ihe nkiri zuru ezu. Na imefe ụlọ n'ime ụlọ ahụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, na-arụ ọrụ na 16 ụlọ inpatient na 20 outpatient clinics. N'ezie, ị ga-ahụ ntinye ego dị ka nọọsụ na ụlọ ọrụ a.
Ọrụ na ụlọ ọgwụ na Healthpoint
Ahụike bụ ụlọ ọgwụ dị na Abu Dhabi na UAE. Ụlọ ọrụ a nwere ike siri ike n'Ịntanet. Hospitallọ ọgwụ niile anaghị adịte aka. N'ihi na e hiwere Healthpoint na 2013. Respect ji nkwanye ugwu diri ndi guzobere ya. Ma kemgbe ahụ na-akpọta ọtụtụ ndị chọrọ maka ọrụ nlekọta ụmụaka na Dubai.
Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ka gị na ahụmahụ gị na agụmakwụkwọ gị. Ebe kachasị mma nke Abu Dhabi Knee & Sports Medicine Center. Ọ bụ ezigbo onye ọrụ maka gị na UAE.
On top of standard nursing jobs in Dubai. Ị nwere ike ịtụ anya na Wooridul Spine Center na Ogige Ụlọ Ọrụ na Bariatric & Metabolic ebe ọrụ. Dika odi, Healthpoint bu akuku Healthada Network Health nke Mubadala. Na ijikwa ọmarịcha ọnọdụ nakwa dịka ụlọ ọgwụ ọha.
Ụlọ ọgwụ Burjeel
Soro ndi otu dibia nwere mmasi n’agbata Burjeel Hospital. Reliablelọ ọrụ a nwere ntụkwasị obi nke ukwuu ma nyekwa oru nlekọta ahu ike di elu na Burjeel na Abu Dhabi. Hospitallọ ọgwụ a inye nkwado bara uru na mmepe ọrụ.
Isi okwu nke ịga nke ọma n’ụlọ ọgwụ. Burjeel nwere akụkọ nke ya. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ obodo ma ọ bụ expat na onye nwere mmasi ya na ha gha ka gi na ha mee. Burjeel, ụlọ ọgwụ bụ otu ụlọ ọrụ na nkwenye nke ndị nke ha. Nke a bụ ihe kpatara na ndị mmadụ na-esonyere ha dịka onye nọọsụ.
Ntughari usoro nke idebanye ndi ozo ohuru na ha di nma. Ọhụrụ ndị na-achọ ọrụ bụ ndị ọkachamara na-akpali akpali. Nlekọta ụlọ ọgwụ a maara nke ọma. Yabụ ọ bụrụ na achọrọ gị ma nwee agụụ gbasara ọrụ nọọsụ na Dubai. Knowmara ihe ị na-eme, anabatụrụ gị ezinụlọ Burjeel. Hospitallọ ọgwụ a nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye karịa ka ị tụrụ anya ya.
Ha chọrọ ndị ọkachamara ahụ ike. Karịsịa ndị nọọsụ ọrụ na Dubai ahụmahụ. Ha na-eghekwa ụlọ ọrụ ọhụrụ na-abịanụ (Burjeel Day Care - Island Reem, Ụlọ Ọgwụ Burjeel - Al Ain, Ụlọ Ahụ Ike Burjeel.
Ọgwụ ụlọ ọgwụ Oasis
Oasis Hospital na - arụ ọrụ karịa ndị ọrụ 300. Isi ihe mere ndị mmadụ si karịa mba 30 gburugburu ụwa na-esonyere ha dị mfe. Ha na-akwụ ndị ọrụ ọtọ. Enweghị ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla. Yabụ na ọ ka mfe inweta ha ọrụ otu a.
Oasis Lọ ọgwụ n'ezie ndi mmadu maka ọrụ nọọsụ na Dubai. Ọ bụrụ na ị bụ nọọsụ nwere oke agụụ maka inye ọrụ nlekọta ahụike kacha elu. Ọbụna na-eme ihe na na-arụ ọrụ na mba ụwa na Al Ain, United Arab Emirates.
Hospitallọ ọgwụ Oasis Nlekọta HR na-achọ ndị mmadụ. Karịsịa na ndị otu ọhụrụ nke ndị ọrụ nwere ike imeghari ahụmịhe ha maka ọrụ nọọsụ na Dubai. Na-arụ ọrụ ezigbo na a gburugburu ọdịbendị dị iche iche bụ isi. Who bu onye I bu ma kpaliri gi iru ala? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, biko zitere gị malitegharịa.
Ọrụ dịịrị gị dị njikere ilekọta maka ndi bi na UAE. mgbe ijikwa oru gi emekwaruwho ẹka ẹka ẹka. Iji maa atụ, agbataobi na Oman. Oasis Hospital na-a onye nkuzi maka United Arab Emirates Ụlọ Akwụkwọ Ọgwụ Mahadum.
Ụlọ ọgwụ Specialist Ajman
Gọọmentị Ajman nwere ụlọ ọgwụ ọpụrụiche. Nke a bụ Ebe dị mfe itinye aka na ịmaliteghachi. N'ihi na Ajman Specialty General Hospital rụpụtara ọkaibe n’inye ndị isi ọrụ.
Ọrụ ndị nọọsụ na Dubai na-arụ ọrụ pụrụ iche n'ịnye ndị bi na Ajman ahụike. Nlekọta nlele ụlọ ọgwụ ndị niile bi na ndị ọrụ ọrụ. Nzukọ a gbara mbọ ka ya na ndị ọhụrụ nwere ike ịmalite ọrụ n'ụlọ ọgwụ.
Na nlekota oru nlekota oru na-acho anya inweta uzo di elu nke ndi nlekota nwa na Ajman. Karịsịa iji gboo mkpa ndị ọrịa na ịkwalite ebe obibi ndị nọọsụ dị mma maka mba UAE.
Onye ọ bụla n’ime ha nwere ndụ pụrụ iche ha nwere. Karịsịa ndị otu ọhụrụ nke ndị ọrụ. Maynye nwere ike na-arụ ọrụ ike dị ka nọọsụ na ahụike ya. Hospitallọ ọgwụ Ajman, ị nwere ike inwe mkpa nke gị na atụmanya gị. Dị Mfe n'ihi na ọtụtụ ndị ọsụ ụzọ akwalitela ọrụ n'ime otu afọ ọrụ.
N'iji Thumbay Clinic arụ ọrụ dịka Nọọsụ
Ebe ọzọ mgbe ịmalite ọrụ ị na-elekọta. Jikwaa onwe gị na debanye aha gị mmasị ịchọpụta oge ọrụ na ụlọ ọgwụ Thumbay. Ma ọ bụ ọbụna na Group dum !.
Otu n'ime ihe ndị a, òtù Thumbay na-agbasi mbọ ike iji nweta ọganihu na ụlọ ọgwụ niile na ọrụ nlekọta. Dị ka ị pụrụ ịhụ na foto a. Otu na-azụ ọtụtụ ndị India. Ya mere, ọ bụ ọ dị mma iji nweta ala maka ọrụ ndị a.
Yana, na-agbasi mbọ ike na UAE. Beingbụ onye e kere eke bụ ikike asọmpi na Emirates. Ọnọdụ ikuku ị nwere ike inye na akụrụngwa niile dị mkpa iji mee ka echiche gbanwee. Kpachapụ anya enyere gị aka inweta ọrụ na ụlọ ọrụ a.
N'akụkụ aka nke ọzọ, ọ bụrụ n’inweta ahụmihe ziri ezi. Na ị na-achọ nọọsụ ọrụ na Dubai. Na-eme ka ọ bụrụ ihe na-akpali akpali maka onye ọ bụla chọrọ ịchụso ọrụ ha na nzukọ Thumbay. Ha nwere ọnụ ụzọ.
Òtù Thumbay maka ọrụ?
Na Thumbay Group ha nwere ọtụtụ ndị ọrụ. Ọzọkwa, ọtụtụ n'ime ha nwere nnwere onwe na-akparaghị ókè arụ ọrụ. Karịsịa ndị ahụ na-achọ ime ka nkà ha na ihe ọmụma ha dị elu na ụlọ ọrụ ụlọ ọgwụ. Ma ọ bụ maka onye ahụ na-amalite ọrụ nọọsụ oru ma na eweli ubi ha nke omuma.
Ndị ọrụ ọhụụ ọ bụghị nanị na-enweta ọkwa dị elu nke ọrụ afọ ojuju. N'aka nke ọzọ, a na-enyekwa ha inwe ohere buru ibu maka uto oru na inwe ọganihu. Ọrụ ha na-agba ndị ọrụ ọhụrụ ume imezi ma mezie. N'ihi na onye ọrịa bụ ihe kachasị mkpa maka ha.
Ụlọ ọgwụ Dibba - Al-Fujairah
Dibba Al-Fujairah bụ isi obodo na ugwu obodo Fujairah nke dị na Northeast akụkụ nke United Arab Emirates. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọgwụ abụghị nnukwu. Mana ị ka nwere ike lee ha anya ka ha na-ewere ọrụ. N'akụkụ na-adịghị mma, ha enweghị weebụsaịtị. Ya mere, ị ga-akpọrịrị ha ma jụọ ha maka email. Ma ọ bụ nbanye ohere na weebụsaịtị Ministry of Health.
Ọ bara ezigbo uru ịrụ ọrụ na obodo a. Ọ bụ mpaghara nke mpaghara Dibba. A na-ewere Dibba Al-Fujairah ka ọ bụrụ obodo 2 nke kachasị na Fujairah. Ụlọ ọgwụ a bụ n'ezie ọ bara uru ileta dịka onye ọpụpụ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ.
N'inwe akụkụ nke square kilomita 600, Dibba Al-Fujairah nwere ọnụ ọgụgụ ndị bi na 31,301 (atụmatụ) na Jenụwarị 2018. Yabụ, ebe a bụ ọmarịcha ebe gị na ụmụ gị na nwunye ga-ebi. Ma ọ bụ ka United Arab Emirates nwalere ndụ.
Enwere ọtụtụ ebe ndị Nọs ga-arụ ọrụ?
Ee! ka esi zipu Resume gị ozugbo
Na akụkụ na-esonụ nke edemede. Ọkachamara anyị gosiri gị otu esi achọ ndị nọọsụ ọrụ na Dubai. Nwere ike izipu nkọwa ngwa gị n'okpuru ụlọọgwụ nkeonwe. Ha na-akpọkwa ndị nọọsụ na United Aarab Emirates.
Pịa na foto a ma tinye maka ọrụ Nursing !.
Ụlọ ọgwụ ụlọ ọgwụ kachasị mma
Ọgwụ Nental Noa
Versailles Ụlọ ọgwụ eze
Ụlọ Al Zahara na Sharjah
Ụlọ ọgwụ ọgwụ
Ụlọ Ọgwụ Europe nke Belhoul
Ọ bara uru iji ego mee dị ka Nọọsụ Ndenye?
Ee, ugbu a bụ oge dị mma maka United Arab Emirates. Akụ na ụba na-eto. Na ịchọta ọrụ dị ka Nọọsụ Ndenye kwesịrị ịdịrịrị mfe. Karịsịa tupu ihe ngosi 2020 ọrụ na ego maka ụlọ ọgwụ.
Na-akwụ ụgwọ ugwo ala abụghị ihe ọjọọ. Maka mmalite nke ọrụ, ị nwere ike ịtụ anya na AED 94,203 kwa afọ. N'ezie, ị nwere ike ibuli ụgwọ gị. Mana ọ ga-adị mkpa ka ị gafere nyocha na mgbakwunye ọzụzụ ụlọ ọgwụ.
A na-ejikọta nkà na-akwụ ụgwọ kasị elu na ụlọ ọgwụ kachasị mma na ndị gọọmenti. Ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị ọzọ dị eji ezigbo ego eme ihe. Karịa nke ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ezigbo ahụmịhe. Can nwere ike iche maka ọrụ dịka Ahụike Home / Nlekọta ụlọ, Ngalaba Nlekọta Ahụike Uche (NICU), Nlekọta & Nzipụta, Ọmụmụ, na Nlekọta Ahụhụ. Nke a arụ ọrụ bụ mmalite siri ike, karịsịa maka ndị na-apụnara mmadụ ihe. Mana ogologo oge, ị ga-ahụ ezigbo uru mgbe ị na-akwalite.
N'aka nke ozo ndi mmadu n’etinye aka n’ozuzu gi, enwela ihe kariri ihe omumu karia 20. Ahụmahụ nwere mmetụta na-erughị ala na ego maka ọrụ a. Mana lelee ihe bara uru. Ego ole ka ị ga - eme n’ime nọọsụ ọrụ na Dubai n'okpuru.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enye ezi ugbu a ndu maka Jobs na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka nke anyị Ndị njem Dubai. Yabụ, buru nke a n'uche, ugbu a ị nwere ike ịnweta nduzi, ndụmọdụ yana inweta ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.